हिँडेरै टिचिङ अस्पताल पुगेकी थिइन् कोरोनाबाट मृत्यु भएकी महिला, एम्बुलेन्समा सिन्धुपाल्चोक – Health Post Nepal
२०७७ जेठ ४ गते १३:५५
झलनाथ खनाललाई कोरोना संक्रमण, नर्भिक लैजाने तयारी
बिहीबार साँझ धुलिखेल अस्पतालमा कोरोनाका कारण मृत्यु भएकी सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेकी महिला त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा दुई दिन बस्दा सम्पर्कमा आएकाहरूको पहिचान सुरु भएको छ।
त्रिवि शिक्षण अस्पताल जानुपूर्व गाेंगबुको कोठादेखि सिन्धुपाल्चोक हुँदै धुलिखेलसम्म आइपुग्दाको सम्पर्कमा आएकाहरूको खोजी र परीक्षण सुरु भएको छ। इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रणमा महाशाखाका निर्देशक डा. बासुदेव पाण्डेले मृत्यु भएकी महिलाको ‘कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ’ करिब पूरा भएको बताए। ‘अब हामी उनीहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नेसँगै उनलाई कहाँबाट सर्‍याे त भनेर पनि खोजी सुरु भएको छ,’ डा. पाण्डेले भने।
महाशाखाका अनुसार मृत्यु भएकी महिलाको कोठाबाट, विभिन्न अस्पताल, गाउँ, सवारी साधनदेखि धुलिखेल अस्पतालसम्म आइपुग्दा संक्रमण सर्नेसक्ने/सार्नसक्ने धेरै ठाउँ देखिएको छ।
कन्ट्रयाक ट्रेसिङमा खटिएको समूहले अहिले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अन्य थप २ जनालाई पनि संक्रमण भेटिएको आधारमा संक्रमणको स्रोत त्यही हुनसक्ने ‘हाइपोथेसिस’ काम सुरु गरेको छ।
महाशाखाले अहिले कन्ट्रयाक ट्रेसिङ र संक्रमणको स्रोत पहिचानका लागि धुलिखेल अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पतालको समेत कम्युनिटी मेडिसिन विभागको टोली खटाएको छ।
महाशाखाका अधिकारीहरूका अनुसार सुरुमा वैशाख २३ गते नै गाेंगबुस्थित कोठाबाट उनी श्रीमान सँगै हिँडेर अस्पताल पुगेकी थिइन्। सेतोपानी बगेको भन्दै अस्पताल पुगेकी महिलालाई सो दिन चिकित्सकहरूले त्यसै फर्कादिएका थिए। कति समयपछि अस्तालमा भर्ना गरिएको भन्ने यकिन हुन बाँकी रहेको महाशाखाले जनाएको छ।
२४ गते पेट दुख्न थालेपछि उनी फेरि अस्पताल गएकी थिइन्। सोही दिन नर्मल डेलिभरी भएसँगै उनी २५ गते डिस्चार्ज लिएर सिन्धुपाल्चोकबाट आएको एम्बुलेन्समा बाह्रबिसे राम्चेस्थित घर पुगेकी थिइन्।
अस्पतालबाट गाेंगवुस्थित कोठामा नगई उनी सिधै सिन्धुपाल्चोक बाह्रबिसेस्थित घर गएकी थिइन्।
महाशाखाका अनुसार गाेंगबु कोठावरपरका मानिसदेखि, अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, स्वीपरसहित एम्बुलेन्सका ड्राइभरसमेतकाे कन्ट्रयाक ट्रेसिङ भइसकेको छ।
वैशाख ३१ देखि ज्वरोसँगै श्वासप्रश्वासमा समस्या देखिएपछि जेठ १ गते बिहानै बाह्रबिसेकै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पुगेकी थिइन्। त्यहाँ उनको एक्सरे गरेर निमोनिया विकसित निदान भएको थियो। सो स्वास्थ्य केन्द्रका ७ जना स्वास्थ्यकर्मीको समेत क्वारेन्टाइनमा गइसकेका छन्।
जेठ १ गते दिउँसै पिएचसीले रेफर गरे पनि एम्बुलेन्स नपाउँदा साँझ ७ बजेमात्रै धुलिखेलका लागि हिँडेको र ९ बजे धुलिखेल पुगेकी थिइन्। चिकित्सकहरूले अस्पताल ल्याइपुर्याउँदा नै ‘अलमाेस्ट कोल्याप्स’ भइसकेको जनाएका छन्। जेठ १ कै राति मृत्यु भए पनि शुक्रबार कोरोना परीक्षण भएको थियो। शनिबार राति मात्रै मन्त्रालयले मृत्यु कोरोनाका कारण भएको पुष्टि गरेको हाे।
‘त्रिवि शिक्षण अस्पतालको प्रसुति वार्डदेखि, राम्चेस्थित पिएचसी, पिएचसी आउन प्रयोग गरिएको बलेरो र धुलिखेल अस्पतालको पनि कन्ट्रयाक ट्रेसिङ सकिएको छ,’ डा. पाण्डेले भने, ‘संक्रमणको स्रोतबारे पनि विस्तृत अनुसन्धान सुरु भएको छ।’
Tags: कोरोना संक्रमण, त्रिवि शिक्षण अस्पताल